တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Sun Guoxiang အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Sun Guoxiang အားယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်း မဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ ရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Sun Guoxiang နှင့်အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာ နိုင်ငံထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေး ၀နျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ Mr. Sun Guoxiang အားလကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ Mr. Sun Guoxiang အားယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျး မဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျ၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှ ရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ Mr. Sun Guoxiang နှငျ့အတူမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာ နိုငျငံထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ မှ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ဆောငျရှကျနမှေုမြားတှငျ ကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေု အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။